How to Unlocked Htc devices on www.htcdev.com ~ Free Mobile Sharing
How to Unlocked Htc devices on www.htcdev.com
2:29 AM Android Tutorials4comments
Android.rar - http://www.mediafire.com/?peph5acto4t8jd3
Superuserzip ဖိုင် - http://www.mediafire.com/?hvhevqie7iyx4kl
super SU - http://www.mediafire.com/?vz2c3d71mfg8std
Download ဆွဲလို့ရတဲ့ Android.rar ဖိုင်ကိုဖြည်ပီးရင် ရတဲ့ဖိုင်လေးခုလုံးအား computer >C ထဲမှာ Android လို့ဖိုင်ဆောက်ပီး အဲ့ထဲထည့်ပေးပါ
ပထမဦးဆုံး http://www.htcdev.com/ အဲ့ကို သွားပါမယ် အကောင့်လုပ်ရပါမယ် အကောင့် ၀င်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေရင် muhin.power@gmail.com ကိုမေးလိုက်ပါနော် ကူညီပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
အကောင့်ဝင်လိုက်ပါ။ LOG in success ဆိုပီးပေါ်လာမယ်
ခဏစောင့်ပါ။ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ß http://www.htcdev.com/bootloader/ အဲ့နေရာမှာ မိမိတို့၏ အကောင့်ဝင်ပီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါမယ်။အကောင့်ဝင်ခြင်းပြီးဆုံး၏။ မသိသောသူများအတွက်သာ သိသောသူများကျော်သွားကျပါကုန်..ခွီခွီးး.တိန်
select your Device နေရာမှာ မိမိတို့ဖုန်းအမျိုးအစားကိုရွေးပေးပါ...
မိမိတို့ဖုန်းနာမည်မပါရင် All other support model ကိုရွေးပါ။
BEGIN UNLOCK BOOTLOADER အစိမ်းကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ခဏစောင့်ပါ မလောပါနှင့်တစ်ခါနှိပ်ပီးလျှင်ရပါပီ။
အစိမ်းကွက်ထဲမှာ YES ကိုနှိပ်ပါ ခဏစောင့်ပါ။
ကျွန်တော်၏ ကွန်နှင့် တော့ ၄၅ စက္ကန့် ကြာ၏။
အကွကိနှစ်ခုကိုအမှန်ခြစ်ခြစ်ပေးပါ. proceed to Unlock Instruction ကိုနှိပ်ပေးပါ။
ခဏစောင့်ပါ။ဒီကိုရောက်သွားမှာပါ à www.htcdev.com/bootloader/unlock-instructions
အဲ့စာမျက်နှာမှာ step 1234 ကိုကျော်ပါ step5ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီကိုရောက်သွားမှာပါ
အဲ့စာမျက်နှာမှာ step 567 ကျော်ပါ step 8 ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီကိုရောက်သွားမှာပါ
ဖုန်းထဲမှာ Home screen >menu>setting>application>unknown source ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။
Home screen >menu>setting>application>development>usb debugging ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။
****ဖုန်းမှာ Home screen>menu>power>fastboot ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ ****
ဖုန်းကို battery ဖြုတ် ပြန်တပ်ပါ ။ ဖုန်းမှာ volume down + power ကို5second မှ 10 second တွဲနှိပ်ပါ
ပေါ်လာတဲ့ဖုန်း screen ရဲ့ bootloader mode မှာ fastboot ကို volume down (သို့) volume up နှင့်ရွေးပီး power ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ bootloader ကိုရောက်သွားပါမယ် ဖုန်းနှင့် computer ချိတ်လိုက်ပါ ကြိုးသိလျှင် Hboot usb လို့ပြောင်းသွားပါမယ်
အပေါ်မှာဒေါင်းထားတဲ့ Android ဖိုင်ထဲဝင် ပါ shift + right click နှင့် open command window here ၀င်ပါ ပေါ်လာသော cmd တွင် fastboot devices လို့ရိုက်ပေးပါ fastboot လို့ပေါ်လာပါမယ်။
နောက်တစ်ဆင့် fastboot oem get_identifier_token လို့ရိုက်ပေးပါ Enter ခေါက်ပါ။ ဖုန်းကို လက်ရှိ်အခြေအနေအတိုင်း computer နှင့်ချိတ်လျက်ထားပါ။
အဲ့ cmd မှာပေါ်လာတဲ့စာသားကို copy ကူးပီး ဒီစာမျကိနှာရှိ http://www.htcdev.com/bootloader/unlock-instructions/page-3
My Device Identifier Token: ရဲ့အောက်မှာ paste ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
copy ကူးဖို့အတွက် cmd မှာ right click >mark နှိပ်ပီး <<<< Identifier Token Start >>>> ဒီစာသားအစမှ <<<<< Identifier Token End >>>>>
ဒီစာသားအဆုံးထိ select လုပ်ပါ ပီးရင် C\_window\_system 32\_cmd.exe ဆိုတဲ့ဘား ပေါ်မှာ right click > edit>copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
My Device Identifier Token: ရဲ့အောက်မှာ paste လုပ်လိုက်ပါ
အဲ့လိုမျိုးပါ ပီးရင် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောင်မြင်သွားပီးဆိုရင် မိမိတို့၏ gmail ထဲကို htc မှ mail တစ်စောင်ရောက်နေပါမယ် မိမိတို့၏ gmail ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
Click here to continue the bootloader unlocking process.
The bootloader unlock key file can only be applied to the device with which you generated the token. ßunlock code ကို download ဆွဲရန်
ရပီဆိုရင် unlockcode.bin ဖိုင်အား computer >C ထဲမှာ Android ဖိုင်ထဲထည့်ပေးပါ။
Android ဖိုင်ထဲဝင် ပါ shift + right click နှင့် open command window here ၀င်ပါ ပေါ်လာသော cmd တွင် fastboot devices လို့ရိုက်ပေးပါ fastboot လို့ပေါ်လာပါမယ်။ နောက်တစ်ခုရိုက်ပါမယ်
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin ပါ အဲ့လိုရိုက်ထည့်ပေးပါ ဒီလိုမြင်ရပါမယ်
ရပါပီဖုန်းမှာ volume up နှင့် Yes ကိုရွေးပေးပါ power ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ power ပိတ်ပီးပြန်တက်လာပါမယ် မိမိတို့၏ဖုန်းဟာလဲ ဆိုင်က ၀ယ်ဝယ်ချင်းပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရပါမယ်
ကဲ ခွီင်္ခွီးး UNLOCK လုပ်ခြင်းပြီးဆုံး၏ Done
Unock လုပ်ခြင်းပြီးဆုံး၏။ သကိဆိုင်ရာ Root လုပ်နည်းများကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် တင်ပေးတွားပါမယ်။
ကိုကို မမ တို့ အကုန် အဆင်ပြေကြ ပါကုန် ခစ်ခစ် ခွီခွီးးးး
diamondseason November 13, 2012 at 7:30 PM
ကြိုးမသိလို့လား မသိဘူး Hboot usb ဆိုပြီးမပေါ်ဘူး ကူညီပေးကြပါဦး
diamondseason November 13, 2012 at 7:31 PM
fastboot usb လို့ပဲပေါ်တယ်......
Tun Aung Kyaw February 4, 2013 at 7:42 AM
Tun Aung Kyaw February 4, 2013 at 7:44 AM